UN Archives - OMN
OMN:Oduu Adol.11,2016 Godina Harargee bahaa aanaa Qumbiitti, poolisoonni Liyyuu Hayil weerara daangaa Oromiyaa irratti raawwataniin namoonni kudha jaha yoo ajjeefaman namoonni jaha ammoo madaayuun himame. Qabeenyi hedduun kan saamame yoo…
Dargaggoonni Oromoo gara leenjii Waraanaatti geeffamaa jiran miliqan.
OMN:Oduu Adol.08,2016 Mootummaan Itophiyaa carraa hojii biyya alaa isiniif argamsiisa sababa jedhuun gowwomsee dargaggoota Oromoo leenjii waraanaa seensisaa akka jiru himame. Godinaalee harargee lamaan irraa haala kanaan gowwomfamanii…
Balaa lolaa Magaalaa Adaamaa mudateen lubbuun namaa darbuun himame.
OMN:Oduu Adol.05,2016 Magaalaa Adaamaa keessatti balaa lolaa yookiin Dirsaa mudaateen lubbuu namoota fi qabeenya irraa miidhaan dhaqabu jiraattonni magaalitti himan. Qaamni mootummaa dhimmichaa furuuf carraqaa kan hin jire tahuun immoo…